Whatsapp maka PC | Site na Linux
WhatsApp bụ otu n'ime ihe ndị kasị ewu ewu ozi ngwaọrụ nke oge a, mana ọ ga-abụ na n'oge na-adịghị anya anyị ga-anwa ịwụnye Whatsapp maka pc, ebe ọ bụ na obi abụọ adịghị ya na ọ bụ usoro dị oke egwu iji nwee ike ịnọgide na-akpọtụrụ ndị enyi na ezinụlọ anyị mana site na ntụsara ahụ dị mfe, inweta ma dịkwa mfe iji. N'ihi nke a, taa anyị ga-akọwa otu ị ga-esi jiri WhatsApp maka PC na-enweghị mkpa ịwụnye ngwaọrụ ndị ọzọ.
Versiondị ọhụrụ nke WhatsApp maka PC
Nke bụ eziokwu bụ na kemgbe ọdịdị nke gam akporo emulators maka PC, onye ọ bụla enweela ike iji ngwaọrụ dịka WhatsApp ozugbo na kọmputa ha. Agbanyeghị, nsogbu bụ na a manyere anyị ịwụnye mmemme ndị ọzọ ma mee ya, nke na-ebelata ọrụ nke kọmputa ochie, na mgbakwunye na nke ahụ, ọ bụrụ na anyị na-agbanwe PC na mgbe niile n'ihi na anyị na-eme njem ọtụtụ mgbe, anyị nwere ọtụtụ kọmputa dị iche iche na-arụ ọrụ na ụlọ, wdg, a manyere anyị ịwụnye nke ọ bụla n'ime ha.
Nke a agbanweelarị ekele maka ụdị ọhụrụ nke WhatsApp maka PC nke anyị ga-ekwu maka oge a.
Nweta WhatsApp na PC gị
Ma ọ bụ na site ugbu a gaa n'ihu ọ dị mfe iji WhatsApp maka PC dịka ọ dị ịga na ibe weebụ ọ bụla.
N'ezie, nke mbụ na maka ihe ọ bụla iji rụọ ọrụ nke ọma, ihe mbụ anyị ga-eme bụ imelite ụdị mkpanaka anyị nke WhatsApp iji nwee ọ enjoyụ kachasị ọhụrụ.
Ozugbo emere, ihe anyị ga-eme bụ ịga na ibe weebụ WhatsApp na iji ihe nchọgharị Google Chrome. Ugbu a, anyị ewere ngwaọrụ anyị wee banye ngalaba Ntọala wee pịa WhatsApp Web. Nzọụkwụ ọzọ ga-abụ ibudata koodu QR nke na-egosi na ibe weebụ na kọmputa anyị ma na ntakịrị sekọnd anyị ga-ahụ na WhatsApp ga-emeghe na-akpaghị aka.
Dị ka anyị pụrụ ịhụ, usoro ahụ abụghị naanị dị mfe mana ọ ga-ewekwa nkeji ole na ole, ebe anyị nwere ike ibu ya site na kọmpụta ọ bụla nwere njikọ Internetntanetị yana ihe nchọgharị Google Chrome arụnyere.
N'aka nke ọzọ, ụzọ ọzọ ọdịnala iji wụnye Whatsapp maka pc Ọ bụ site na Bluestacks, ihe emulator Android maka PC nwere ezigbo aha ma dịkwa mfe ịwụnye, ọ bụ ezie, ee, na nke a, anyị ga-ebu nwụnye zuru ezu na ngwa kọmputa anyị ọ bụla.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịhụ ya nzọụkwụ site nzọụkwụ ị pụrụ ịhụ nke a ọzọ isiokwu - >> Wụnye WhatsApp na PC
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » ọtụtụ » Whatsapp maka pc
norm patricia Laguna dijo
Nzaghachi norma patricia Laguna
Teknụzụ dị ebube
Benọgide na-ekwurịta okwu mgbe niile
Wilfredo kwuru dijo
Achọrọ m ibudata ya
Zaghachi ka wilfredo querales
milena Andrea dijo
Zaghachi milena andrea
ihe na-eme dijo
Ọ dị mma ịnweta ngwa a
Nahomi gonzales dijo
Zaghachi Nahomi Gonzales
Ọ ga-amasị m ibudata wattsap na pc m biko
Leidy Diana dijo
Achọrọ m inwe whatsapp
Zaghachi ka leidy diana
Achọrọ m naanị ma chọọ ọtụtụ ka m nwee whatsapp
Zaghachi ka emilia
N'ihi ngwa a, ewezuga inwe nkwukọrịta, a na-emelite ya karia, enwere ike ịkpọ oku n'efu, wdg, ọ bụ ezigbo ngwa nke ejirila nke ọma.
Alexander Alexander dijo
Zaghachi percy alejandro
Amaghim ka esi eme ya?
Ok sep ka inwere ike ịkpọ r
Enwerem emelitere! Ekwenti imi onye nyere m aka biko
Ndewo Yorleni imeghe ntọala wee gaa izugbe ma ebe ahụ ị mepee mmelite.
yadira barboza magana dijo
Ndewo, achọrọ m ịnweta WhatsApp
Zaghachi yadira barboza magaña
Omume Xfce 4.12 Rebọchị mwepụta